Izinto ezili-10 eziphambili zobubele e-UK
Ezinye izithethe azange zenzeke. Ukuba unxulumano lwangoku, mhlawumbi lixesha lokuphonsa ingcamango embalwa yothando lomdaniso kumxube, mhlawumbi nakwindlela yesitrotho. Iintyatyambo kunye ne-candy ziye zahlala zilungele kwaye izidlo zokukhanyisa ikhandlela zineendawo zazo ezizodwa. Kodwa phawula iliso lakho kwizinto ezimbalwa ezithandanayo zokwenza e-UK lo suku lwe-Valentine.
Yiba nokuhlangana okufutshane
UDavid Williams / Getty Izithombe
Isikhululo seCarnforth eLancashire sasimela eMilford Junction kweso sikolo saseBritish weepie, uDavid Lean's Short Brief Meeting . Esi sikhululo sisandul 'ukuhlaziywa, ngokuhlonela ngokugcwele isikhundla sayo njengendawo yendawo ye-cinema kwaye ungadibana phantsi kwexesha eliboniswe kwifilimu.
Cwangcisa uhambo lwesitimela ukuya kwisiKhululo seCarnforth, indawo yokuBambana okufutshane .
Thenga iNgcaciso emfutshane ngokukhawuleza kwaye ubambelele kule mabali amaninzi eBrithani enothando.
Okanye, unokudibanisa okufutshane okwenu kwisebe yaseLondon esanda kuhlaziywa iSt. Ukudibana nomfanekiso kaPaul onobude obungama-30, Indawo yokuHlanganisa, uze uphuze i-champagne kwibha ye-champagne ende kunazo zonke, kwisikhululo sesitishi.
Thenga enye idijithali ...
UJeffrey Hamilton / Getty Izithombe
... kwaye wenze isiko lenziwe kwinqanaba elimangalisayo leBeyili yeBirmingham. Ubuncinane ubunama-40% obungcweti obwenziwe e-UK - kubandakanywa kakhulu okufumana indlela eya kwiivenkile ezizodwa zeMefair yaseLondon - lwenziwa kwikota yesigxina seBirmingham. Ummandla uzele abaqulunqi bemveliso (abanye baqeqeshwe kwikholeji yesigqeba sezithili) basebenza kwiivenkile ezincinci, ezivuthayo. Bakwazi ukudala isiqwenga kwiinkcukacha zakho, ngokuqhelekileyo kuncinci kunokuba ungalindela ukuhlawula umsebenzi wesiko. Isiqwenga esiyingqayizivele sobunxiba sisipho esikhethekileyo kunoma ubani.
Ukutyelela i-Sexy Giant
I-Cerne Abbas Giant ingaba sisikhumbuzo samandulo kwiindawo zaseBritish Isles. Eyona ndlela ivumeleke iNational Trust, ehloniphekileyo kakhulu kumaziko aseBrithani, imchazele - "Umxholo omkhulu ukhangelwe kwisigxina se-chol ngaphezu kwedolophana yaseCerne Abbas emele i-naked, evuselelana ngesondo, i-club-ixhaphaza."
Izibini ezingenamntwana kunye nalabo abanethemba lokwenza imiphunga elongezelelweyo kwiintsebenziswano zabo ziye zahanjelwa kwiintlanganiso ezinobungakanani kufuphi neyona nto ibalulekileyo. Kwixesha elidlulileyo, abanye baye bachitha ubusuku apho. Ukuba ulwimi oluboshwe kwiSuku lweValentine, qwalasela ukuba ezinye iifoto - ezindala zenziwe zichithwe kwisixokelelwane - zinokuthetha amazwi awaka.
Yiba yiNkosi neNkosikazi yeNqaba
Tim King / EyeEm / Getty Izithombe
Awukwazi ukuhamba ngaphandle kokuqhayisa kwinqaba okanye inqabeni yonakalisa kwindawo ethile e-UK. Okumangalisa ngakumbi, iimbopheleleko zazo ziye zaphendulwa kwiihotele ezizodwa zezithengiso. Khawucinge ngekamelo elincinci kunye neendonga zamatye zasendulo, umlilo ogqumayo, iingubo ze-baronial kwiindawo zonke. Ewe, namhlanje, ininzi ihotele ihotele yinto encinci ye-hotel boutique. Kodwa uya kufumana iimibhede ezine zeposter, amagumbi okuhlamba omhle, iimbono eziphambili zomhlaba, izidlo, izilwanyana kunye nezinye izinto ezininzi ukugcina ezo zintando zothando.
Gcina izandla kwiBhitshi elihle
Andy Stothert / Getty Izithombe
Into enhle malunga nokuhamba ngaselwandle oluhle kukuba kukuthanda ukutshatyalaliswa - okanye kwimozulu epholileyo - njengosuku olukhanyayo. I-UK inezilwandle ezintle kakhulu, ezichongiwe ngumoya, ngamaqhwa e-ice age kunye nemida ende. Enyanisweni kunyaka odlulileyo, i- National Trust yaseWales ibiza ezinye zeendawo eziphezulu zokupasa umbuzo, kwaye ezininzi zazo zazinxweme.
Incwadi ye-Honeymoon Suite
Anna Henly / Getty Izithombe
Kutheni kufuneka iSuku lweValentine libe yithuba elilodwa loba ubalekele ukuphuka ngokukrakra ekwenzeni uthando, egumbini elihle okanye elifanelekileyo? Kwaye kutheni kufuneka i-honeymoon suites igcinwe kubantwana bentsapho? Iindawo ezithandana kakhulu zizele ezinye izithandane zothando ngeSonto likaValentine. Uhlobo olufana nokujoyina iklabhu kwaye phi i-private romance? Bhala ikhefu lomtshato ngenye ixesha - i-honeymoon suites inengqiqo kakhulu phakathi kwebusika okanye ngasekuqaleni kwentwasahlobo - kwaye unike enye into ebalulekileyo ukugcinwa kwayo, idibanise kwibhokisi ye-chocolates, mhlawumbi, njengeSipho sikaSuku sikaSipho ngesipho esizayo. Ezinye iindawo ezithandekayo esizithandayo:
Indlu yeBathente e-Ardanaiseig Hotel
Zilahleke Ngaphandle Kwendawo
Ukutyelela iBritain / iPete Seaward / Getty Izithombe
AmaNgesi awona makhulu adala ama-mazed hedge mazes kwaye ayengabonakali nje kwintsapho. Emuva kwinqanaba le-English design design, emithathu okanye emakhulu eminyaka edlulileyo, ama-mazes ayindawo yokudlala ngothando kunye nabathandi bezithandane. Hamba xa abantwana basesikolweni kwaye uza kuba nexesha elithile labucala lokuba uguqulwe (okwiBritani ukulungiswa), phakathi kweendonga ezinqamlekileyo zeew hedges. Zama enye yalezi:
Inqaba yeLeeds: Ebizwa ngokuba yiConstallest Castle kwihlabathi, inomqolo okhulu weew kunye nokuphuma kwinqaba ye-shell shell.
I-Hampton Court Maze: UJerome K. Jerome Amadoda amathathu eSikhepheni alahleka kulo mzila oneminyaka engama-300 ubudala.
Iphepheni yeHedge yeHedge: Umzila oneminyaka engama-20 ubudala kwi-classical, iLabyrinth yoLungiso luthando .
I-Hedge Maze e-Longleat : Hamba xa abantwana basesikolweni bekunandipha lo mzila ogqithiseleyo, wamanje.
Fumana okucocekileyo kwiCottage
I-Suffolk i-Pink Cottage ehlambulukileyo e-Kersey. © Ferne Arfin
Ukuqeshisa iholide - okanye yokutya-akuyona nje intsapho kunye namaqela. Iidolo zaselizweni zingaba ziindawo ezifihlakeleyo ezibini. Cinga ngako, nonke ngokwenu ngaphandle komlilo ogqumayo, imbono enhle, imithwalo yobumfihlo. Funda ngeminikelo yezinye iinkampani zethu ezikhethiweyo zokuqeshisa iholide; siye safumana ezinye iimpawu zothando.
Yithi ngeeNgesi zeRoses ...
Iilesi zesiNgesi kwi-Chelsea Flower Show. © Ferne Arfin
... okanye i-tulips, i-poppies, i-peonies, i-orchids-nawuphi na weewaka zeempawu ezihle kwi-Chelsea Flower Show. Akunakucwangciswa ngo-Meyi kodwa itekiti sele isethengiswe kwi-Intanethi yi-Valentine's Day kwiwebhusayithi yaseRoyal Horticultural Society, Kutheni ungayiboni iikiti zeentyatyambo zeentyatyambo kwiintlobo ze-roses zesiNgesi. ) ngokumangaliswa yothando.
Ukuthandana Ngamanye NgamaLwandle
Uyilo lwe-Pics Inc / Getty Izithombe
Isithili saseNgilani seLake isithandana ngokungathandabuzekiyo naliphi na ixesha lonyaka; iindawo ezihlukahlukeneyo, iinduli kunye nokuwa, kunye namachibi amakhulu, athathwe ngamathambo angamaqhina okanye anqabileyo kwikhephu, afanelekile ukuba abe nococeko kumntu okhethekileyo.
I-Windermere, ngokuqinisekileyo iyona yothando kakhulu kuwo onke amachibi, ijikelezwe yimiyezo yasemaphandleni kunye neenduli zeengcongolo ezinamathole. Kwaye ningacingi ukuba abagcini-zindwendwe nabasondli boo ndawo abazi. Ngomhla kaFebruwari, balala ngokukhethekileyo kwaye baphatha ama-Valentines nabathandi. Zama enye yezi:
Gubungela ubushushu kwaye udibanise ndawonye kunye neLake Windermere. I-Steamer ihamba ngeemvula emanzini amnyama agijima kulo lonke ubusika.
Thatha ukuhamba ngokulandelana kweenkuni kwiimpawu zokuqala zexesha leemvula zeqhwa e-Holehird Gardens ngaseVermermere, kunye nemibono emihle yelibi.
Balekela kwihotele yexesha lobuGcisa kunye neNgqungquthela, uHolbeck Ghyll, ejongene nelibi kwiindawo eziphazamisayo. Unokucwangcisa umtshato wakho ngelixa udla kwivenkile yokutyela e-Michelin.
I-Blenheim Park kunye neeGarden - "Ukwazi" uBucebisi obuBhulu
I-Orkney Ngaphantsi kwamanzi - Dive The Shipwrecks of Scapa Flow
Ukugxotha kwiiSityela, iBhari kunye nePas eNgilani
ISithili seLake kwiSiqalo: Isikhokelo esiKhuselekileyo kwiLwandle lwaseNgesi
Uhambo Olukhulu LamaTrothi - I-Settle to Carlisle Line
Iipetroli zenziwe lula
Yintoni i-Art Deco?
4 Izixhobo ezinkulu zokuphuza ngaphandle ezihamba ngeentambo kunye neekampu
ILake Malawi, EMpuma Afrika: I-Complete Guide
I-Beltane - Ukwamukela ihlobo laseNtshonalanga kunye neMthendeleko yase-Celtic
Indlela yokucwangcisa i-Weekend Getaway e-Caribbean
Iifama zeeTeksi iMarike kufuphi nePittsburgh Ixhamla kwiindawo ezihlala kuyo kunye nabavakatyeleli
Into onokuyilindela kwii-Toilets yaseSweden
Isikhokelo esibanzi samaHawaii
Iziqithi ezi-6 ezidume kakhulu ePanama
Izinto Ezozenzayo eMacau Ngaphandle kwamaCasinos